Email Kushambadzira Statistics | Martech Zone
China, January 10, 2019 Svondo, Ndira 13, 2019 Douglas Karr
Email inoramba ichitungamira kuriritira uye kuchengetedza zano reanenge ese mabhizinesi online. Inotengeka, zviri nyore kuitisa, zviri kuyerwa, uye inoshanda. Zvisinei, kana masangano akashandisa zvisina kufanira iyi svikiro, ichava nemigumisiro.
Spam isina kukumbirwa iri kunze kwekudzora uye mabhizinesi akawandisa anoenderera mberi nekutyora mutemo webasa revapi veemail uye zvinyorwa zvekupinza. Nekuita izvi, ivo vari kudzikisira iyo email mukurumbira yebhizinesi ravo uye maemail ekusarudza-mukati, vanyori vanokosha havasi kuonekwa. Vari kuenda vakananga kune junk folda.
Zvinoenderana neiyi infographic, Email Kushambadzira neNhamba: A Smart Investment, kubva kuCampaign Monitor, heano manhamba ekupedzisira kushambadziro kweemail
Sezva 2018, vanhu vanopfuura 3.8 bhiriyoni pasirese vanoshandisa email. Ndiyo hafu yenyika yose!
Vashandisi vanowanzo kanopfuura kamwe kero yeemailavhareji ndeye 1.75.
Vashandisi vanotumira pamwe chete 281.1 mabhiriyoni emaimeri zuva nezuva, Mamiriyoni 195 paminiti imwe neimwe.
Nyika shanu (China, United States, Germany, Ukraine, neRussia) dzakapa hafu yenyika email spam.
The avhareji email tinya-kuburikidza chiyero (CTR) muNorth America iri 3.1%, iri 4.19% muUnited Kingdom.
Zvichida nhamba yakakosha yeemail yakagovaniswa: vatengi vanouya kune yako saiti uye tenga kuburikidza neemail link shandisa, paavhareji, 138% kupfuura vamwe vatengi!
Heano akazara infographic kubva kuchikwata chiri Campaign Monitor:
Tags: avhareji ctrEmail Marketingemail kushambadzira manhambaemail yakazaruka mitengoemail nhambamangani maemail anotumirwamitero yakazaruka